Kubada cagta waa ciyaar la jeclaa kasta eegin ka mid ah da 'kooxeedyada. Ma noqon doonto khalad ah oo u sheegay in ay tahay ciyaar caan ah oo dhan kulan yaqaan adduunka. Sidaas, ilaalinta ee aragtida taageere soo socda ee kubada cagta, samaynta ciyaarta ayaa loogu tala galay kulan aad u badan oo ku saabsan mawduuca iyo qaar ka mid ah hogaanka ciyaaraha kubadda cagta android halkan ku qoran.
1. Marka hore Touch Soccer 2015
Platform: shuruud OS Ugu Yar haddii Android 4.0 iyo kor.
Tani kulan madadaalo iyo adag fududaan kara inuu ciyaaro laakiin waa yara adag tahay in sayidkiisa. Kabacdi iyo kubad goolka u badan tahay in ka dhigi doonaa addict ciyaaryahan ee kulankaan ka.
Platform: shuruud OS Yar ee ciyaarta waa Android 2.2 iyo kor.
Waa wax play aan caadi ahayn ee kubada cagta. Halkan, halkii samaynta play guul, ciyaaryahanka waa at caqabad ku ah guusha kulankii badan sii kordhaya ee zombies sidaas halkii ay diiradda ay count kordhaya, diirada saaraan samaynta kubada madaxooda-joojin si ay u sameeyaan iyaga dhintay.
Platform: Android 2.3 iyo kor u tahay shuruudda OS ugu yar ee ciyaarta.
Waxa ay ku siinaysaa ciyaaryahanka xorriyad ah oo ay kooxda adduunka ugu fiican u ciyaaro ku dhufto ee wanaagsan ee loo yaqaan iyo garoomada.
4. Soccer Xiddiga Free
Platform: shuruud Ugu Yar OS waa android 2.3.3.
Tani ciyaar kubada cagta ah ee Android, siinaysaa ciyaaryahan ee fursad u ciyaaro ciyaarta ay doorashada ku ciyaartoyda of style cartoon si ay u sameeyaan koox ciyaari doonaan si ay u helaan abaal iyo aad u badan. Jidka guusha, ciyaaryahanka ku guuleysan karo oo ku gadato waxyaabaha ka badan koox ka badan oo xoog leh tayana leh.
5. cirib Fallaadha gan, 2
Platform: Android 2.3 iyo ilaa
Hel waayo-aragnimo ah ciyaaraha kubadda cagta u fiican iyo ugu dambayn la "cirib Fallaadha gan,". Tallaabada koowaad waa in la soo dajiyo ciyaarta in qalabka Android oo markaas ku raaxaystaan ​​laadadka xorta ah ee hababka kala duwan ee ciyaarta sida One Ball, Tournament, Arcade, Goal Post iyo qaar kale.
6. Top Eleven noqdo tababare Soccer
Platfrom: shuruud OS ugu yar waa Android 2.2.
Player Dhigayaan koox ka, tababar kooxda oo dunida ka mid ah ciyaartoyda kubadda cagta ee ciyaarta meel kaga dhacay, online. Halkan, ciyaaryahanka geli doonaa dunida oo dhan ee ciyaarta online tartamada, horyaalka iyo horyaalada iwm
Looga baahan yahay ugu yar OS waa Android 2.3 iyo ilaa.
Gala garoonka dhabta ah, gebi ahaanba. Tani version ciyaarta updated 2012 kulan kubada cagta ayaa naqshadeynta macquul ah oo siman oo wax badan ka dhigaya ciyaaryahanka dareemayaa sida uu isagu / iyadu waa xiddiga ciyaarta adduunka dhab ah.
8. cirib Kick Football fureyso
Platform: shuruud OS Yar ee ciyaarta waa Android 2.3 iyo kor.
Jooji kubada off ka dhigi goolka la cirib ah farta. Waa Saaxiib fiican in ay ku raaxaystaan ​​waqtiyada firaaqada ah. Ku raaxeyso ciyaartoyda style sawirlaha dhulka kubada cagta.
9. cagta oo ka furmay
Platform: shuruud OS ugu yar waa Android 2.3 iyo kor.
Waxa uu soo jiitay malaayiin ciyaaryahanka la qaababka ay cajiib ah sida 3D stadium doorashooyin iyo 6 hababka kala duwan ee ciyaarta oo ay ku jiraan; Win Euro, iskutallaabood kubada, ku garaacday saacad, garaaco goolhaye oo lama filaan ah hab dhimasho.
Platform: Android 2.3.3 waa looga baahan yahay OS ugu yar.
Sida cagta ma aha oo kaliya oo ku saabsan laadadka xorta ah, laakiin wax badan oo ka mid ah qorshaynta iyo tabaha ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah muhiimadda ugu weyn kulanka guul. Sidaas, kulankaan diiradda saarayaa xeeladaha macalin halkii ay dhab ahaantii dhulka ku ciyaaro.
> Resource > Emulator > Top 10 Football Games u Android Users